Nweghị Intanet? Mụọ otu esi ewere ebe nchekwa gị n'ụlọ | Site na Linux
Mgbe m nwere kọmputa n'ụlọ, m na-eji GNU / Linux na-enweghị nsogbu ọbụlagodi na enweghị enweghị internet iji repositories.
Ihe m mere bụ iwere nnomi nke ngwugwu arụnyere na kọmpụta ọrụ m ma wụnye / melite ha n'ụlọ. Enwere ọtụtụ ngwa na ụdị dị iche iche iji mee nke a, m ga-egosi gị ụfọdụ.
2 Na-aga n'ihu:
3 Iji dpkg-scanpackages
Ezigbo maka ndị ọrụ nke Ubuntu. Na APTOnCD anyị ga-ewere nchịkọta niile anyị nwere na ebe nchekwa APT na a .iso enweghị nsogbu ọ bụla. Iji wụnye ya:
Iji jiri ya, naanị ihe anyị na-eme bụ iji ọsọ na-eme ngwa ahụ ma mee ihe ọ na-agwa anyị site na nkwụsị. Ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya.
Nwere ike iburu ebe nchekwa gị na .iso (ma ọ bụ ọtụtụ, dabere na nha) Ebe obula ichoro ka iga Nwere ike ịmepụta iso na CD y DVD.
Nwere ike iwepụta .iso ma detuo ihe niile dị na folda, ma melite ebe ahụ.
APTOnCD na-achọpụta mgbe ị nwere nchịkọta ọhụrụ ma tinye ha na-atụfu ndị ochie.
Ọ bụrụ na ịnweghị CD-RW o DVD-RW Ga-efu ego ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị imelite kwa ụbọchị, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwe dị ka ebe ọzọ 2 nke uru.
Ọ bụrụ na iji dabara adaba nwere ọtụtụ alaka (Ule, Sid, ibuo), o nwere ike inye gị ụfọdụ njehie mgbe ị na-etinye mgbakwunye.
Nhọrọ a dị mma maka Debian piakota. na Nyocha Debian Enwere m nsogbu ụfọdụ n'ihi na anaghị m idetuo ngwungwu na folda ebe aga.
Iji wụnye ya:
Nhọrọ niile apt-aga enwere ike nyocha ya n'akwụkwọ ntuziaka (man apt-move). Nhazi ya dị n'ime / wdg / Capt-move.conf anyị ga-agbanwekwa ihe ụfọdụ na ya, maka nke a, anyị mepee ọkacha mmasị anyị nchịkọta akụkọ na faịlụ ahụ:
Anyị ga-eburu n'uche usoro ndị a, nke bụ naanị ndị anyị ga-agbanwe:
Nke a ezughi oke na ntọala.
Dị mfe dị ka ịgba ọsọ:
Nke a ga - e copyomi anyị, maka folda anyị họọrọ, nchịkọta niile dị na ebe nchekwa anyị
Mepụta usoro nke enyo na ngwugwu anyị nwere n'ime oghere.
Otu dị iche iche na Isi na Nye naanị ngalaba, yabụ mgbe ị na-agbakwunye adreesị na source.list, naanị anyị ga-etinye isi na-abụghị n'efu.
Y’oburu na anyi nwere ihe dabara adaba, anyi nwere ike ibudata alaka ulo oru n’onwe ya.
Ruo ugbu a, ahụbeghị m.
Mara: Nke a bụ ihe dịka iji APTOnCD
Ọrụ nke ngwa ọrụ a bụ ịmepụta obere repo ị nwere ike ibugharị ma tinye na ya isi mmalite.list, site na faịlụ ebudatara ma ọ bụ ndị nke ị tinyere n'onwe gị.
Ọnọdụ ọrụ bụ dị ka ndị a: Akpa wụnye dpkg-dev
Detuo faịlụ site na oghere dị na folda ahọpụtara iji rụọ ọrụ, ọ bụrụ na a na-akpọ ya repo ma ọ dị na / ụlọ / onye ọrụ / repo /.
I nwekwara ike ịgụnye .deb na ị chọrọ
Ugbu a, anyị na-aga folda anyị: repo (n'okwu a).
na anyị na-ekpe:
Ihe anyị na-eme ebe a bụ ịgụ nchịkọta niile dị n’ime ya / ụlọ / onye ọrụ / repo / a na-eke faịlụ ahụ Ngwungwu.gz jiri ozi a; Dabere na ọnụọgụ nchịkọta, ọ ga-abụ oge iji rụchaa usoro ahụ.
Iji malite ịrụ ọrụ na mini-repo ọhụrụ emepụtara, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ itinye ya na isi mmalite.list, nke a na-enweta site na isoro usoro ndị a:
Na nchịkọta akụkọ anyị (nke a nano):
Anyị na-agbakwunye usoro ndị a:
Ọ dị mkpa ịkọwapụta, iburu n'uche, na mgbe faịlụ gasịrị, a na-etinye colon (:) wee tinye otu slash (/) n'ime ya, yana mgbe folda ikpeazụ gasịrị, na Desktọpụ a, anaghị egbochi ya oghere na obere folda mini-repo (repo) na ịsụ na ịgba.
Site na usoro ndị a, anyị emeela mini-repo dị njikere ibufe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Nweghị Intanet? Mụta otu esi eweghachi ego gị n'ụlọ
Ihe mana maka nkesa na-eji RPM?
Eleghị anya YumonCD:
Agbatụbeghị m ya, mana ọ bụ echiche / ngosipụta ebe m ga-amalite ile anya.
Na nwute, anyị enweghị ahụmịhe n'ụdị ngwugwu a, mana n'ezie enwere ebe dị iche.
Enwere ihe okike iji mepụta nchekwa site na ndekọ aha ebe ọba akwụkwọ dị.
Lelee anya http://blog.kagesenshi.org/2007/01/howto-creating-your-own-yum-rpm.html ebe a ka ha kọwara usoro a kọwara nke ọma.
Ọzọ ekwe omume bụ iji keryx, I nwere ike ibudata nchịkọta si Linux ma ọ bụ Windows, wee wụnye ya na kọmputa gị na-enweghị ịntanetị. Ọ na-arụ ọrụ naanị maka Debian na Ubuntu.
Emekwara m ụfọdụ oge gara aga usoro ihe omume ibudata ngwungwu maka Linux na-enweghị ịntanetị, mana m ga-ahapụ U_U ka ịmalite ọrụ ọzọ a ga-agbagọ, nke m ga-eweta tupu ngwụcha afọ 😀
Were bụ onye okike nke sushi-huh? : -O Chaị, nnukwu. Ejiri m ya ọtụtụ oge. Ọ bụ eziokwu na enwere ngwaọrụ ndị ọzọ eserese, aga m achịkọta ozi gbasara ya.
Echere m na ihe kachasị mfe maka m bụ mgbe niile ịzọpụta nchịkọta site na / var / cache / apt ma nyefee ha na ebe nchekwa ma ọ bụ ihe ọ bụla. Abatala ụlọ, mepee ihe njikwa m, gaa na folda ebe nchịkọta ndị ahụ ma wụnye ihe niile site na ịpị sudo dpkg -i * .deb
Ezigbo ihe ngwọta, ALL, gụnyere Drnocho's, blog magburu onwe ya, enwere m obi anụrị mgbe m chọtara blọọgụ na-arụ ọrụ gbasara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, yana ọbụlagodi ma ọ bụrụ gbasara Debian anyị hụrụ n'anya.
Obinna Iwuchukwu !!!
Ekele enyi, ọ bụ ihe obi ụtọ inye aka na inyeghachi ntakịrị ihe ọmụma niile obodo nyere anyị 🙂
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ mgbazi, mana ọ bụrụ na anyị ejiri ntụgharị-agagharị na akara ahụ ga-adị ka nke a:
sudo aptitude update && sudo aptitude upgrade && sudo apt-nkwalite melite
Ọ bụ ezie na ọ na-ada ụda ma ọ bụ ihe doro anya, mana, enwere ndị mmadụ na-anaghị aghọtacha obere nkọwa hahaha.
Daalụ maka ozi ahụ ... 😀
Onwere ihe dika Synaptic? Maka m ọ kachasị mma
daalụ maka ozi ahụ, mana ajụjụ na-ebilite aptoncd na - ewepụta ihe iche na mmemme ebudatara na pc na ịntanetị mana na pc na - enweghị intaneti ọ ga - enwerịrị aptoncd mana arụnyere ya na pc na ịntanetị mgbe ahụ, kedu ka ị si weghachite iso nke emere na-enweghị aptoncd na pc na-enweghị ịntanetị.
Ihe ahụ dị mma ... Enwere ụdị ngwaọrụ ndị a mana ha lekwasịrị anya na nchịkọta .rpm?
Ndewo. Kedu ihe ị na-adụ m ọdụ. Enwere m toshiba computer partitioned na windo 7 na Debian Linux 7 site na iji GRUB. Dịka ọ bụ usoro eserese ATI x1200, a hapụrụ m ahụhụ na ọ nwere naanị tty screen. Mgbe ị na-ahazi sudo, ahụghị iwu akara. Agbalịrị m ibudata ebe nchekwa na Suhsi huh na camicri cube, ọ gaghị ekwe omume. Enwere ụzọ ọ bụla ị nwere ike isi kwado m.
Zaghachi Antonio A
New ISOs maka Sabayon Linux v7